एक घण्टा सोशल मिडिया को एक दिन ... | Martech Zone
शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
वास्तवमा त्यहाँ छैन डोऱ्याउनप्रति मिडिया, सोशल मिडियाको लागि। धेरै व्यक्तिहरू तपाईंलाई सोशल मीडिया वा के गर्ने भनेर बताउन चाहन्छन् वा तिनीहरूको विजयी रणनीति साझा गर्नुहोस्… तर मैले यो काम गरेको लगभग कम्पनीको लागि बिभिन्न किसिमले काम गरेको मैले देखेको छु। आज, एरिक डेकर्स मसँग अलेक्ज्याण्डर क्लोत्जबाट यो ट्वीट साझा गरियो:
संसाधनहरू सबैको लागि चुनौती हो ... मेरो सानो व्यापार सहित। हाम्रो लक्ष्य भनेको एक हप्तामा ईमेल राख्नु हो, दिनको दुई ब्ल्ग पोष्टहरू, र ट्वीटर, लिंक्डइन, गुगल + र फेसबुकमा कुराकानी गर्ने। हामी नराम्ररी असफल भइरहेका छौं! यो यस्तो चुनौती हो कि हामी चाँडै नै अर्को संसाधन भर्ती गर्दैछौं सामाजिक मिडिया एजेन्सी केवल जारी राख्न प्रयास गर्न। त्यो कम्पनीको प्रत्यक्ष खर्च हो कि सीधा लगानी मा एक परिणाम मा परिणाम छैन ... तर समय संग, म निश्चित छु यो हुनेछ।
त्यहाँ शीर्षकमा धेरै स्रोतहरू छन्। म यसको पक्षमा झुकाव राख्छु जय बेयर, जेसन फल्स र माइकल Stelzner मान्छेहरु लाई मन पर्छ Hubspot सामाजिक मिडिया सल्लाह को लागी। जबकि म मान्छे मा लाग्छ Hubspot शानदार छन्, तिनीहरूको सामग्री रणनीति एक अत्यधिक चार्ज इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीति हो। तिनीहरू ड्राइभ गर्न को लागी जानकारी साझा गर्न को लागी आफ्नै कम्पनी। जे, जेसन र माइकलले कसैलाई विक्रेतालाई टाढा रहनको लागि ठूलो काम गर्छन् (उनीहरूले आफ्नो प्रायोजकहरूको खुला रूपमा वर्णन गर्दछन्) तर हातमा मुद्दा र सम्भव समाधानहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
वास्तवमा, समय एलेक्सिको लागि उत्कृष्ट छ - माइकलको उपस्थितिको लागि सानो व्यवसाय सामाजिक मीडिया सफलता शिखर सम्मेलन यस महिनाको अन्त्यमा। शिखर सम्मेलनले २२ सोशल मीडिया पेशेवरहरू व्यवसाय मालिकहरू र मार्केटरहरूलाई कसरी सामाजिक मिडिया मार्केटि master गर्ने (सोशल मिडिया परीक्षकद्वारा तपाईं लाई ल्याइएको) सिकाउने कार्य गर्दछ। प्रस्तुतकर्ताहरू सामेल छन् यर्मिया ओवाइ। (Altimeter समूह), ब्रायन सोलिस (लेखक, संलग्नता), फ्र्याक एलिसन (सिटी ग्रुप), मारी स्मिथ (सह-लेखक, फेसबुक मार्केटिंग), एरिक क्वालम्यान (लेखक, सोसनोमिक्स), माइकल Stelzner (संस्थापक, सामाजिक मीडिया परीक्षक), दान जरेला (लेखक, सामाजिक मिडिया मार्केटि Book पुस्तक), एन्डी सेर्नोभित्ज (लेखक, माउथ मार्केटि Wordको शब्द), डेभिड मेर्मन स्कट (लेखक, वास्तविक समय मार्केटिंग र PR); बोइ,, इन्टेल, सिस्को र भेरिजनका विज्ञहरू; जय बेयर (सह-लेखक, अब नाभी क्रान्ति), Hollis Thomases (लेखक, ट्विटर मार्केटिंग), स्टीभ गारफिल्ड (लेखक, हेर्नुहोस्), मारियो सुन्दर (लिंक्डइनबाट), र Ann Handley (मार्केटिंगप्रोफ्स) - केहि नाममा समायोजित गर्नुहोस्। (प्रकटीकरण: त्यो मेरो सम्बद्ध लिंक हो)।
यहाँ मेरो सल्लाहहरू छन् स्रोतहरू बिना सामाजिक मिडिया प्रबन्धन:
धेरै स्रोतहरूमा एक्सपोजर एक भन्दा धेरै राम्रो छ। कुनै एक तथाकथित अनुसरण नगर्नुहोस् गुरु। हामी सबै बिभिन्न कम्पनीहरु संग काम गर्छौं र केहि रणनीतिहरु जित्ने देख्यौं, केहि हराउँछ ... र धेरै पटक उही ठ्याक्कै रणनीति जित्छ र हराउँछ। खर्च गर्नुहोस् 15 मिनेट एक दिन उनीहरूको लेख र कुराकानीको बोध गराउँदै।
तपाइँको दर्शक खोज्नुहोस्। नेताहरू, सहकर्मीहरू, र तपाईंको उद्योगमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछ्याउनु भनेको तपाईंले खोजिरहनुभएको दर्शकहरूको पहुँच पाउनको लागि उत्तम तरिका हो। ट्विटरमा तिनीहरूलाई अनुसरण गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई फेसबुकमा जस्तै, तिनीहरूलाई Google+ मा सर्कलमा जोड्नुहोस्, र केही लिंक्डइन समूहहरूमा सामेल हुनुहोस्। एक पटक तपाईले यो कुराकानीमा सामेल हुने अवसर ठूलो हुनेछ। खर्च गर्नुहोस् 15 मिनेट एक दिन भित्र को कुराकानी जुन तपाइँ र तपाइँको व्यवसायको लागी महत्वपूर्ण छ।
तपाईंको झण्डा लगाउनुहोस्। यदि तपाईं एक नेता बन्न चाहानुहुन्छ भने, मान्छेलाई नेता दिनुहोस् र किन। तपाइँको नाम लिन प्रतिक्षा गर्नुपर्दैन ... तपाइँ लामो समयको लागि पर्खिरहनु हुनेछ। म साना व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछु जुन म ब्लग गर्न, बोल्न, र उनीहरूको अधिकार प्रदर्शन गर्न कार्य गर्दछु। तपाईको र तपाईको अनुभव बारे अधिक पढ्न र पढ्नको लागि ब्लगले केन्द्रीय भण्डार प्रदान गर्दछ - ताकि तिनीहरूले व्यापार गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्धारण गर्न सक्दछन्। तत्काल बोलेमा तपाईंको अधिकारको पहिचान प्रदान गर्दछ ... यदि तपाईंले पहिले यसमा चूसनुभयो भने पनि! र साझेदारी गर्ने साइटहरू मार्फत तपाईंको अधिकार प्रदर्शन गर्दै Slideshare शानदार छन्। खर्च गर्नुहोस् 20 मिनेट एक दिन सामग्री सिर्जना गर्दै।
आफैलाई बढावा दिनुहोस्। केवल एक पोष्ट, ट्वीट वा अपडेट नलगाउनुहोस् र व्यक्ति आउने आशा गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नै बढुवाको राजाहरू लिनु पर्छ। खर्च गर्नुहोस् 10 मिनेट एक दिन तपाईंको सामग्री प्रमोट गर्दै। सुरुमा, यसले अतिथि ब्ल्गमा बोल्ने अवसरहरू खोज्न, बोल्न वा शब्द खरीद गर्न विज्ञापन खरीद गर्न पनि सक्दछ।
म सबै दिन सोशल मिडियामा खर्च गर्दैन ... यद्यपि यो जस्तो देखिन्छ। I तालिका ब्लग पोष्टहरू र लागू उपकरणहरू जस्तै बफर इष्टतम समयमा ट्वीटहरू र फेसबुक अपडेटहरू ट्रिक गर्न। मेरो सबै सामाजिक मिडिया अनुप्रयोगहरू अद्यावधिकको साथ एक स्मार्टफोन भएको राम्रो छ - जब म यहाँ र त्यहाँ बैठकहरूको बीचमा, सडकमा, वा कफीको कप पिउँदा केही बेर लिन सक्छु।
अन्तमा, यो लगानी हो ... खरीद होइन। एक दिन एक घण्टा खर्च गर्नाले तपाइँले खोजिरहनु भएको परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्दैन। तर एक बर्षको एक घण्टा एक बर्षको लागी दिईन्छ कि तपाईलाई ध्यान दिनुहोस्! म मान्छेलाई यसको बारेमा सोच्न को लागी तिनीहरु अरु अरु लगानी ... हरेक पोस्ट, प्रत्येक ट्वीट, प्रत्येक अपडेट, प्रत्येक प्रशंसक, प्रत्येक अनुयायी ... उनीहरु तपाईको खातामा सबै पैसा छन्। यदि तपाइँ लगानी रोक्नुहुन्छ भने, तपाइँले निवेशको भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त गर्नुहुन्न।
फेब्रुअरी १,, २०११ 7:१:2012 अपराह्न
राम्रो पोष्ट! मलाई मनपर्दछ कि तपाईं यसलाई एक प्रबन्धनीय रकममा टुक्र्याउँनुहुन्छ। म जहिले पनि व्यक्तिलाई अनुभूति हुन्छु जस्तो उनीहरूलाई टिप्पणी गर्न वा प्रतिक्रिया दिनको पहिलो हुनु पर्छ। र जब यो व्यावहारिक महसुस गर्दैनन्, तिनीहरू छोडिन्छन्। कसैको लागि जो सुरु गरिएको छैन, मलाई लाग्छ कि एक हप्ताको लागि एक घण्टा एक दिन मात्र खर्च गर्नु भनेको त्यहाँ के हो बाहिर आफूलाई डुबाउनु र कुन उपकरणले उनीहरूको लागि उत्तम काम गर्ने निर्णय लिनु भनेको डुबकी लिनको लागि उत्तम तरिका हो।
धेरै धेरै धन्यवाद, @ ट्विटर - ११116342558२XNUMX: डिस्क! सामाजिक मिडिया पक्कै पनि एक श्रम गहन, नन-स्टप गतिविधि हो जुनसँग धेरै फाइदाहरू छन् तर यो पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। मलाई थाहा छ कि 'चुनकी' 'उत्पादक हुनको लागि एक उत्तम तरिका हो जब तपाईं यति ठूलो कार्यलाई निल्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।
अप्रिल 9, 2012 मा 10: 05 एएम
मैले सामाजिक मिडिया असंतुलनको साथ संघर्ष गरेको छु किनकि मैले चार बर्ष पहिले शुरू गरिसकेका थिए… किनकि यस विषयलाई केही उत्कृष्ट सुझावहरू र अन्तरदृष्टि सहित सम्बोधन गरिएको थियो। न्यानो, सुसन